मानव जीवन, सपना र आत्मबिश्वास – ईमेची डटकम
हामी मानव जातीले यति धेरै अधिकार पाएका छौं कि जुन पशुपंक्षी तथा बनस्पतिहरुले पाउन सकेका छैन । यति धेरै अधिकार भएर पनि मानिस किन दुखी छ ? हामी किन यति धेरै निराशाको बन्दी भएका छौ ? हामी मानिस मात्रले पाएको विशेष अधिकार हो , छनोटको अधिकार। “we human beings are free to make our own choices” हाम्रो जीवनको लगभग ९९ % कुराहरु आफै छनौट गर्न पाउँछौं। जस्तै हामीले को संग संगत गर्ने कोसंग नगर्ने, आफ्नो जीवन साथी को हुने नहुने, करियर कै कुरामा पनि कुन स्कुलरकलेज छान्ने या कुन पेसा तथा व्यावसायमा संलग्न हुने। यति धेरै स्वतन्त्र भए पनि हामीलाइ सधैं गुनासो रहन्छ। यहाँ अरुको गुनासो सुन्न , आँसु पुछ्न कसै सङ्ग समय छैन र सधैं सम्भव पनि हुँदैन ।आज हामी ज्यूँदो छौ किनकी कुनै दिन हामी जन्मेका थियौ र हामिलाइ राम्रोसँग थाहा छ कि त्यो हाम्रो हातमा थिएन र मर्ने कुरा पनि हाम्रो हातमा छैन। त्यसैले डराउनु भन्दा आफ्नो लागि के राम्रो होला भन्ने सोच्न थाल्ने पो हो की ?
B= Birth ….D=Death अनि B र D को बिचमा आउने C= Choice जुन सधै हाम्रो हातमा छ। त्यसैले आज हामी जो जो जस्तो ठाँउमा छौ त्यो अरु कसैको होइन हामी आफ्नै छनोटको परिणाम हो। साथसाथै भोलि हामी कस्तो हुने भन्ने पनि आज हाम्रो कस्तो छनोट गर्छौ त्यसमा भर पर्छ। हामी सधै सफलताको पछि भाग्छौ र यो भुल्छौ कि जसरी जन्म सङ्गै मृत्यु पनि हुन्छ त्यसै गरि सफलता सङ्गै असफलता पनि साथ मै आएको हुन्छ र त्यो असफलतालाई आफ्नो जिन्दगीको म्याराथन यात्राको finishing line हामीले सम्झनु हुदैन। किनभने असफलता नै सफलताको लागि पहिलो खुड्किलो हो।
मानिसले विशेष अधिकार पाएता पनि आफुले आफूसङ्ग होस या अरु संग सम्झौता त गरेकै हुन्छ। तर सम्झौता गर्दै जादा हामी आफैलाइ थाहा हुदैन कि म के कुरामा चाहिँ सम्झौता गरि रहेको छु।के त्यो विषय मैले सम्झौता गर्नु नै पर्ने खालको हो भनेररु। आमाहरु भन्नु हुन्छ छोरा त्यहाँ नजाऊ, त्यो काम नगर तर हामी सम्झौता भने उल्टो कुरामा गर्छौ। आफूले निकै ठूलो सपना देखेका छौ र त्यो सपना पूरा गर्ने बाटोमा धेरै पटक लडिएला। आफू लडियो भनेर म अब उठ्न सक्दिन भनेर त्यो बेला नै हामीले हाम्रो सपनासङ्ग सम्झौता गर्छौ। घरमा कसले के के भन्नुहुन्छ त्यस्ता ससाना कुरामा हामी बहस गर्छौ त्यसैले पहिला हामीलाई कुन कुराले धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ। घरमा भन्नु भएका स (साना कुराहरु मान त्यस्ता कुरामा बहस किन गर्नेरु आफ्नो सपना र उज्ज्वल भविस्यलाई कुल्चिन तयार भएर साना कुरामा अल्झिनु मुर्खतापूर्ण काम हो। भनिन्छ नि -Never compromise with your Dreams.
मलाइ यस्तो काम गर्न रुचि छ भन्दैमा मात्र केहि हुदैन र उस्ले मेरो लागि गरिदिन्छ भन्ने भरमा पनि हुदैन। अरुमा निर्भर हुन छोडनु पर्छ र स्वलम्वी हुन कोशिस गर्नुपर्छ। पहिलो त आफूले आफूप्रति बिश्वास गर्नु राख्नु अपरिहार्य छ। हामीलाई कसैले सगरमाथाको चुचुरोमा राख्न सक्दैन , अफै हिड्नै पर्छ। पौडी खेल्न चाहानेले आफै पानीमा पसेर हातखुट्टा आफैले चलाउनु पर्छ। नदि सम्म त अरुले लगिदेलान् तर पौडी उस्ले खेलाउदैन। हामीले सुन्यौं, पढ्यौं मानिससङ्ग असिमित शक्ति छ भनेर तर समस्या एउटै छ। अधिकांश मानिसलाइ बिश्वास छैन कि उसङ्ग जे पनि गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर। जब जब उस्ले आफुमा बिश्वास गर्न थाल्छ तब सबै कठिनाई हरु सामान्य लग्न थाल्छन। परको डाडोलाई दूरबिनबाट हेर्दा निकै ठुलो देखिन्छ र त्यो डाडो म पार गरेर जान सक्दिन जस्तो लग्छ र जब त्यहि दुरबिन तिमिले उल्टाएर हेर्छौ तेहि डाडो सानै देखिन्छ।तेसैले कुनै पनि कुरालाई यथार्थमा भए भन्दा ठुलो पारेर नहेरे त्यस्ले आत्म बिश्वास नै गिराउन सक्छ।आफूले आफूमा बिश्वास राखौं सफलताको बाटो आफै देख्ने छौ।
(लेखक :धरानस्थित बिपीकोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा बिएस्सी नर्सिङमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ )